Lacagta shuruud ah oo lagu xidhay Murrashaxiinta Guddoomiyaha Waddani - Haldoornews | Haldoornews
Lacagta shuruud ah oo lagu xidhay Murrashaxiinta Guddoomiyaha Waddani
Hargeysa(Haldoornews):-Guddida fulinta ee Xisbiga Waddani, ayaa kulan ay maanta ku yeesheen Magaalada Hargeysa, kaas oo ay kaga hadleen arrimo khuseeya shirweynaha Xisbiga ee bisha dambe.
Shirkan oo ay ka qayb galeen xubnaha Guddida fulinta ee Xisbiga Waddani, ayaa waxyaabaha lagaga hadlay waxa ka mid ahaa ajandaha lagaga hadli doono iyo go’aamada ka soo bixi doona shirweynaha Xisbigaasi.
Ma jiro war rasmi ah oo laga soo saaray weli kulankan iyo qodobadii lagaga hadlay, hase yeeshee sida ay Wargeyska Saxansaxo u xaqiijiyeen warar xogogaal ahi, waxa shirkan lagaga hadlay qodobadan;
■In Murrashax Guddoomiyaha Waddani uu bixiyo 25 kun oo dollar
■ In murrashaxiinta Xoghayaha iyo kuxigeennada Guddoomiyuhu bixiyaa 10 kun oo dollar
■In Ergada shirweynaha imanayaa ay noqdaan ku dhawaad 900 oo ergay oo ka kala imanaya gobollada, degmooyinka iyo qurbahaba.
■ In Shirweynuhu ka qabsoomo Hargeysa, gaar ahaan Maansoor Huteel.
■In Xisbigu yeesho Guddoomiye iyo shan Guddoomiye kuxigeen, Xoghayaha Guud iyo kuxigeen, kuwaas oo lagu dooran doono shirweynaha Xisbiga.